Vaovao - Ahoana no hitazomana ny lohan'ny mpanonta?
Amin'ny maha singa fototra an'ny milina fanontam-pirinty, ny fahamarinan-dohan'ny loha fanontana dia mamaritra ny kalitaon'ny masinina. Raha somary avo ny vidin'ny raikitra amin'ny fanontam-pirinty, ny fomba fanitarana ny androm-piainan'ny lohan'ny fanontam-pirinty, hampihena ny vidin'ny fanoloana sy ny ambaratongan'ny akanjo, ary hitazomana tsara ny loha fanontana. Zava-dehibe amin'ny fivarotana dokambarotra sy mpandraharaha fanodinana io! Ny olon-drehetra dia tsy vahiny amin'ny fanontana loha.
Amin'ny maha singa fototra an'ny milina fanontam-pirinty, ny fahamarinan-dohan'ny loha fanontana dia mamaritra ny kalitaon'ny masinina. Raha somary avo ny vidin'ny raikitra amin'ny pirinty, ny fomba fanitarana ny androm-piainan'ny loha pirinty, hampihena ny vidin'ny fanoloana sy ny haavon'ny akanjo, ny fikojakojana ny milina fanaovana pirinty inkjet dia tena zava-dehibe amin'ny fivarotana dokambarotra sy ny mpandraharaha fanodinana!
Tinta ho an'ny milina fanontana inkjet
Ny ranomainty sy ny noza no singa roa lehibe amin'ny fanontana ara-dalàna ny milina fanontana inkjet sy ny vokatra azo antoka amin'ny sary. Mifampiresaka izy roa ary ilaina. Noho izany, hitazomana ny nozoro amin'ny fanjakana fanontana tsara indrindra, misy ny fepetra takiana amin'ny kalitaon'ny ranomainty sy ny fomba fiasan'ny milina fanontana inkjet.
1.Fandrarana ny fampifangaroana: Maromaro ny ranomainty eny an-tsena, ary tsy mitovy ny firafitry ny solvent novokarin'ny orinasa tsirairay. Ny fampifangaroana ny karazana sy ny andiana inks isan-karazany dia mora tohina amin'ny fihenan'ny simika, izay mety hiteraka fandokoana loko sy fahaverezan'ny loko, ary hahatonga ny rotsak'orana hanakana ny vavahady, ka voarara ny fampifangaroana ny inksitra anatiny sy ivelany ary ny fidiran'ny marika samy hafa.
2.Mampiasà kalitao ambany noho ny fitandremana: Ny ranomainty ambany dia tsy miankina amin'ny fenitra amin'ny fahaiza-miteny sy ny reducibility, izay hisy fiantraikany amin'ny sary farany sy ny fandefasana baiko. Ny poti-pigmenta lehibe dia afaka mandoro ny noza ary miteraka fitafiana sy fanjifana maharitra, koa aza mitsiriritra ny vidin'ny ranomainty ambany, satria ny fatiantoka kely dia tsy mendrika ny fatiantoka.
3.Fidio ny tany am-boalohany: tsara kokoa ny misafidy ny ranomainty tany am-boalohany an'ny mpanamboatra milina fanontana inkjet, izay andrana amin'ny andrana amin'ny fanandramana sy ny fampiasana maharitra. Izy io dia mifanaraka amin'ny lohan'ny pirintin'ny milina fanontana inkjet ary milamina sy azo itokisana. Manome antoka maharitra maharitra aorian'ny fivarotana ny mpanamboatra. Io no safidy tsara indrindra amin'ny ranomaintin'ny milina fanontana inkjet.
Fiasan'ny milina fanontana Inkjet
1.Sutdown sy famehezana: Rehefa vita ny asan'ny milina fanontam-pirinty, alao antoka fa ny loha pirinty sy ny stack amin'ny ranomainty dia atambatra mafy mba hanasaraka ny rivotra sy hamandoana tanteraka ny loha pirinty hisorohana ny fanakanan'ny lohan'ny fanontana.
Fiarovana 2.Power-off: Alohan'ny fanoloana ny faritra na fanatontosana ny milina fanontam-pirinty dia tadidio fa ny milina fanontana inkjet dia tsy maintsy alefa. Aza mametraka na misintaka araka ny sitraponao.
3. Fanesorana zavatra avy any ivelany: Afa-tsy ny fanjifana taratasy dia voarara ny mametraka zavatra hafa vahiny eo amin'ny lampihazo fanontam-pirintin'ny milina fanontana inkjet, izay hiteraka fahavoazana amin'ny nozona mandritra ny hetsika.
4.Misorohana herinaratra mijanona: mitahiry fanjifana azo ampiasaina mba hisorohana ny fifandirana sy ny famokarana herinaratra. Ny masinina dia tsy maintsy ampifandraisina amin'ny tany alohan'ny hampiasana azy, ary ny fonon-tànana miaro dia tsy maintsy atao rehefa mikasika ny nozera.
5.Maintenance: Raha tapaka ny lohan'ny pirinty, tadiavo aloha ny hamafiny, ary avy eo ampiasao ny fomba mifanaraka amin'izany hamahana azy. Ataovy miadana mandritra ny fanadiovana. Aza terena ny tsindrona hiteraka fahavoazana maharitra amin'ny loha fanontana.
Tontolon'ny milina mpanonta
1.Temperature sy hamandoana: tandremo ny mari-pana sy ny hamandoana manodidina ny milina fanontana inkjet. Ny mari-pana dia 15-30 degre, ary ny hamandoana dia eo anelanelan'ny 40% -60%. Raha tsy mahafeno ny fepetra takiana ny tontolo iainana dia azonao atao ny manamboatra «conditioners», dehumidifiers, fanamainana volo ary fitaovana hafa hanatsara ny tontolon'ny asa.
Famaritana 2.Voltage: amina atrikasa fanodinana fitaovana marobe, asaina manamboatra volavola fanamafisam-pahefana matanjaka mba hiantohana ny famokarana herinaratra maharitra mandritra ny asan'ny milina fanontana inkjet, mba hahafahan'ny milina fanontana inkjet ho novokarina sy namboarina milamina kokoa.
3.Mampihena vovoka: Amin'ny fararano, maina ny toetrandro, be rivotra ary tsy be orana, izay mety hiteraka rivotra, fasika sy vovoka mora foana. Tsy tsara ny rivotra any anaty trano. Ny vovoka dia miditra ao amin'ny noza, tabilao ary ampahany amin'ny mpanonta, ka manelingelina ny herinaratra mijanona ary manentsina ny nozera. Raiso ny fepetra mifanaraka amin'izany. Ilaina tokoa ny fepetra fiarovana.
Ny orinasa Yinghe dia manome loha marika Printer nafarana isan-karazany, toa ny Epson, HP, Canon, Muto, Ricoh, Xaar, sns., Miaraka amin'ny fiantohana kalitao, fanafarana vaovao 100%, ary isa betsaka amin'ny fihenam-bidy.